नेता सत्ताको खेलमाः भुइँमा छट्पटिदै संक्रमित ! « Drishti News – Nepalese News Portal
नेता सत्ताको खेलमाः भुइँमा छट्पटिदै संक्रमित !
२३ बैशाख २०७८, बिहिबार ७ : ५५ मा प्रकाशित
भैरहवा । अस्पतालका शैय्या भरिएका छन्। संक्रमित अस्पताल बाहिर छट्पटिदै छन्। आफन्तको रुवाबासी छ। उपचारका लागि गुहार गर्दैछन्। कोही संक्रमितलाई ह्विलचेयर बसालेर डुलाउँदै छन्।
अक्सिजन सकिएर कोही सिलण्डर गुडाएर लग्दैछन्। भारतकै यस्तो दृश्य हामीले टेलिभिजनमा केही दिनअघिसम्म हेर्दै आएका थियौँ। तर, यो दृश्य भारतको नभई भैरहवाको हो। रुपन्देही जिल्लामा संक्रमणको अवस्था विकराल भइसकेको छ।
भैरहवाको सरकारी भीम अस्पतालमा शैय्याको अभावमा संक्रमितको उपचार समस्या देखिएको छ। अस्पताल आएका संक्रमितको उपचारका लागि शैय्या अभाव भएपछि भुइँमै अक्सिजनको सहारा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी अस्पताल संक्रमितको उपचारमा आनाकारी गरिरहेका छन्। कतै भनसुन गरेर भर्ना गरे पनि मनपरी शुल्कले ढाँड सेक्दै छन्।, यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।